အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာ
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Jun 6, 2013 in Copy/Paste | 12 comments
အစိုးရ၊ အလုပ်လက်မဲ့တွေနဲ့ အခွန်ထမ်းဆောင်လူများ
ဥရောပတွင် အလုပ်လက်မဲ့ ၁၉ ဒသမ ၅ သန်း ရှိနေပါသတဲ့၊ ဒီပမာဏဟာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ တိုက်မှာရှိတဲ့ လူဦးရေနီးပါး ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ သြစတြေးလျမှာ လူဦးရေ ၂၂ သန်း ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါး အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့ တူနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အနောက်တိုင်းမှာ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြ ရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်မှ စားသောက်ရပါတယ်။ ငယ်စဉ်က မိဘကျွေးမွေး ထားပေမယ့် အရွယ်ရောက်ရင် အလုပ်လုပ် ရတာပါပဲ။
ရှေးခေတ်က လုပ်အားဟာ အဓိက ကျတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ်ကတည်းက အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ ကလေးဘ၀ ကတည်းက စစ်တိုက်ရပါတယ်။ (မင်းရဲကျော်စွာဆိုရင် ကလေးစစ်သားပဲပေါ့) သတ္တုမိုင်းတွေထဲမှာ ကလေးလုပ်သားများစွာ လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက အလုပ်လုပ်ရတာကို Charles Dicken H.G Well တို့၊ ဂျက်လန်ဒန်တို့ရဲ့ စာတွေထဲမှာ တွေ့ရမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေကို ဒီတိုင်း ခိုင်းတာထက် ပညာသင်ပေးပြီးမှ ခိုင်းတာ ပိုပြီးထိရောက်တာကို သိလာကြတယ်။
ဒါကို ဘုရင်တွေ ပုဏ္ဏားတွေနဲ့ ချမ်းသာတဲ့ သူတွေက သိကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့သားသမီးတွေကို ပညာသင်ပေးကြတယ်။ ရှေးကတည်းက တက္ကသိုလ်ပြည်ဆိုတာ ရှိတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတွေမှပဲ ဒီလိုသင်ကြားပေးဖို့ တတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ရှေးခေတ်ဂရိ၊ အေသင်မှာ ဆောခရတ္တိတို့ အရစ္စတိုတယ်တို့ရဲ့ ကျောင်းတွေမှာလည်း မင်းညီမင်းသားနဲ့ သူဌေးသူကြွယ် သားသမီးတွေသာ ပညာသင်တယ်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပညာရေး လိုအပ်ချက်တွေကို ဘာသာရေး အ၀န်းအ၀ိုင်း (Religious Institutes) တွေက ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ ခရစ်ယာန်တွေက သူတို့ရဲ့ Churches လို့ခေါ်တဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေမှာ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက ဗလီကျောင်းတွေမှာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေကတော့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသားတွေကို ပညာသင်ပေးတဲ့ အစဉ်အလာကို စတင်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ စာရင်းဇယား အတိအကျ မရှိပါ။ အလုပ်လက်မဲ့တွေ ဘယ်လောက်များနေလဲ။ ပျံကျတွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ သူတို့တစ်တွေကို အစိုးရက ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်လဲ။ အထူးသဖြင့် အခွန်ထမ်းတွေကရော တကယ်ပဲ အခွန်ဆောင်ကြလား။ ဒီအခွန်တွေကရော ပြည်သူတွေအတွက် (နိုင်ငံတော် တိုးတက်ဖို့အတွက်) ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးအတွက် သုံးစွဲဖို့ စိတ်ကူးများ ရှိရဲ့လား . . . . .
ဒီအစဉ်အလာဟာ အတော်လေး ကောင်းတာကို လူအများ သိကြပါတယ်။ လူတွေရဲ့ အစွမ်းအစဟာ အကန့်အသတ် မဲ့ပါပဲ။ ပညာသင်ပေးလိုက်၊ စာလေးတတ်လာတယ် ဆိုရင်ပဲ လူတွေဟာ ထင်ထားတာထက် တိုးတက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တစ်ခေတ်က အမေရိကန်မှာ လူမည်းငွေဝယ် ကျွန်တွေဟာ စာသင်ကြားခွင့် မရှိဘူး။ စာမဖတ်ရဘူး။ စာသင်ပေးတဲ့ သူကိုလည်း ပြစ်ဒဏ်အကြီးကြီး ချတာပါပဲ။ အီဗရာဟင်လင်ကွန်း လက်ထက်မှာ ကျွန်တွေကို လွတ်မြောက်ခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကျွန်တွေက ဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို မသိကြပါဘူး။ ဒါက အစပါပဲ။ နောက်တော့ ကျောင်းနေခွင့် ရလာတယ်။ ပညာသင်ခွင့် ရလာတယ်။ နောက်တော့ ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူမည်းတွေဟာ ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်လာတယ်။ နောက်တော့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အခု အခါမှာတော့ လူမည်းသမ္မတတောင် ဖြစ်လာပါပြီ။
ပညာဟာ အရေးပါတာကို အဲဒီနိုင်ငံတွေက သတိပြုလာကြပြီး မသင်မနေရ ပညာရေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ သူတို့ ကလေးတွေကို ငါးနှစ်ကနေ ၁၆ နှစ်အထိ မသင်မနေရ ပညာရေးကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ ၁၇ နှစ်အထိ ပညာသင်ဖို့ ပြဋ္ဌာန်းပြီး၊ ၂၀၁၅ မှာတော့ ၁၈ နှစ်အရွယ်ထိ မသင်မနေရ ပညာရေးကို ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလည်း ယခုအခါ မူလတန်းအထိ မသင်မနေရ ပညာရေးကို ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ နှစ်စဉ် ဘွဲ့ရများ သိန်းဂဏန်း မဟုတ်တောင် သောင်းဂဏန်းချီ ရှိပါတယ်။ ဘွဲ့ရတွေအားလုံး အလုပ်မရကြပါဘူး။ တချို့ပဲ အလုပ်ရပါတယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ သင်ကြတဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ ထဲကလည်း အလုပ်မရသူတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဆိုလိုတာက ပညာသင်ဘွဲ့ ရထားလည်း အလုပ်မရပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ဥရောပက ၁၉ ဒသမ ၅သန်းသော လူတွေကို ဘယ်သူက ကျွေးမွေးထား ပါသလဲ။ အမှန်ပြောရရင် “အခွန်ထမ်း” တွေက ကျွေးမွေးထားပါတယ်။ အခွန်ထမ်းတွေက အခွန်ဆောင်တယ်။ ဒါကို အစိုးရက သင့်တော်သလို သုံးပါတယ်။ အလုပ်မရှိ သူတွေကို ကျွေးမွေးရတဲ့အတွက် အစိုးရဟာ နိုင်ငံအတွက် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ့်အစား အလုပ်မရှိတဲ့ လူတွေကို ကျွေးမွေးနေရပါတယ်။
အစိုးရတွေဟာ အလုပ်လက်မဲ့တွေအတွက် Food Stamp လို့ခေါ်တဲ့ တိုကင်တွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့တွေဟာ အဲဒီ Food Stamp တွေနဲ့ ဆိုင်တွေမှာ လိုတဲ့ စားသောက်စရာတွေကို ၀ယ်ယူလို့ရတယ်။ အစိုးရက ဆိုင်တွေကို Food Stamp တန်ဖိုးအတိုင်း ငွေတွေထုတ်ပေးပါတယ်။
ဒီတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက အစိုးရဟာ ပြည်သူပြည်သားတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ စောင့်ရှောက်ကြရပါတယ်။ စောစောကပြောတဲ့ Food Stamp တွေ ပေးဖို့အတွက် အလုပ်ရှိသူတွေက အခွန်ဆောင်ရပါတယ်။ (အခွန်ရှောင်ရင် အစိုးရဟာ လုပ်ရကိုင်ရ ခက်တယ်။ နောက်ဆုံး နိုင်ငံတော်လည်း ကြွေးတင်ပါတယ်။)
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ စာရင်းဇယား အတိအကျ မရှိပါ။ အလုပ်လက်မဲ့တွေ ဘယ်လောက်များနေလဲ။ ပျံကျတွေကတော့ အများကြီးပေါ့။ သူတို့တစ်တွေကို အစိုးရက ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်လဲ။ အထူးသဖြင့် အခွန်ထမ်းတွေကရော တကယ်ပဲ အခွန်ဆောင်ကြလား။ ဒီအခွန်တွေကရော ပြည်သူတွေအတွက် (နိုင်ငံတော် တိုးတက်ဖို့အတွက်) ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေးအတွက် သုံးစွဲဖို့ စိတ်ကူးများ ရှိရဲ့လား။ စာရင်းဇယားတွေရှိမှ နိုင်ငံတော်ကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ အခွန်ထမ်းတွေလည်း ရှိမှ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေလည်း အကျင့်မပျက်မှ ဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာဟာ ကမ္ဘာမှာ တင့်တင့်တယ်တယ်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားဖို့ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိပါသလဲ။
ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညိုဆိုတာ … IQ အရမ်းမြင့်တဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်ရှင် စာရေးသူမျိုးမို့ … တထွာတမိုက် ဥာဏ်လေးနဲ့ မဝေဖန်ရဲပါဘူး ။
ကလေးလုပ်သားများစွာ လိုအပ်ပါတယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့တော့ မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးလုပ်သားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး တကယ့်ကို နည်းနည်းလေးပဲ ပွားခဲ့ချင်ပါတယ် … ကလေး လုပ်သား (အရွယ်မရောက်သေးသူ) သုံးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကလေးတွေ အလုပ်ရအောင် တဖက်တလမ်းက အကူညီပေးတယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကောင်းတပ်လို့ ရပေမယ့် …. လေဘာချာခ်ျ့ သက်သာလို့ ၊ ကွန်ပလိန်းတက်တာနည်းလို့ ၊ လူကြီးတွေထက်ပိုပြီး ထိန်းချုပ်ရ လွယ်လို့ စတဲ့ အချက်တွေကိုလည်း မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးရောချလို့ ကလေး အလုပ်သမားလူတန်းစားဖန်တီးဖို့ မသင့်ပါဘူး ။
ဒီတိုင်းခိုင်းတာထက် ပညာသင်ပေးပြီး ခိုင်းတာမျိုးကလည်း ၊ ၀က်ပေါ်ဖို့ ၀က်စာကျွေးတယ်လို့ပဲ မြင်မိပါတယ် ။
အလုပ်သမား လူတန်းစားမှာကလေးတွေကို မသုံးစေချင်ပေမယ့် ၊ မဖြစ်မနေ ထမင်းရှာစားဖို့ အလုပ်သမား ဖြစ်လာရရှာတဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ … ခိုင်းစေချင်လျှင်တောင် ၊ အန္တရာယ်မရှိတဲ့ တာဝန်မျိုးပဲပေးပြီး ခိုင်းစေသင့်ပါတယ် ။
တလောက … လမ်းထိပ်အိမ်က ဘွားတော်ကြီး တစ်ယောက် သရက်ပင်အောက် ကြွက်ကြွက်ညံအောင် အော်နေတာ မြင်ခဲ့ရတယ် … ။ စပ်စပ်စုစု သွားကြည့်တော့…. သူက သရက်ပင်အောက်ကနေ ဟို အသီးမှည့်နေပြီ .. ဒီအသီးဆက်ခူးဦးဆိုပြီး instruction တွေ ပေးနေလိုက်တာ … လက်ညှိုးတတွတ်တွတ်ထိုးပြီ … /စိတ်ဝင်တစား အပင်ပေါ် ဘယ်သူတက်နေလဲ ကြည့်တော့ လွယ်အိတ်အနီလေးထဲ သရက်သီးတွေ တလုံးပြီး တလုံး ခူးထည့်နေတဲ့ အကိုင်းခက်ဖျားပေါ်က …7နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက် …. ။ မဖြစ်စလောက်လေး ပေးပြီး … အသုံးချတယ် ..မတော်ကျိုးပဲ့ပြုတ်ကျ .. ဆေးဖိုးတောင်ရမှာမဟုတ်ဘူး … ။ ဖွိးးးးးးးး ရွံထှာ … :chee:
တခြားနေရာဒွေဒေါ့ သိဝူး .. ညန်မာ နိုင်ငံမှာ ကလေးလုပ်သား ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ကံဆိုးဘီသာ မှတ်
အမေရိကားမှာလည်း.. အမေရိကန်ကလေးကို.. အလုပ်လုပ်ခိုင်းလို့ကတော့…
အရင်ပြောဖူးတဲ့အတိုင်း.. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတွေဟာ.. လူ့အခွင့်အရေးကို လွှမ်းမိုးပြီး ပျက်ပြယ်စေပါတယ်..။
မြန်မာပြည်မှာများ.. ဈေးပေါပေါပဲပဲရမယ့်လုပ်အားတွေ.. အနောက်ဖက်ကမ်းမှာစုနေတာ…
မြန်မာတွေသုံးမသုံးတတ်တော့မသိ… ချိုင်းနားက.. ချိုင်းနီးစ်တွေကတော့.. သုံးတော့မယ်..
အစိုးရပိုင်းက ဥပဒေပြဌာန်းပေးရပါမယ်။ ပြဌာန်းရုံတင်မရပါဘူး P-D-C-A ရမှာပါ။
အလုပ်ရှင်တွေ ဘက်ကလည်း အတိအကျလိုက်နာပြီး မလိုက်နာရင် ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်
ခံကြရမှာပါ။ (အစိုးရပိုင်းက C-A မှာ လာဘ်စား ချကိုက် မဖြစ်နေဖို့တော့လိုပါတယ်)
အဲ့လို ဆိုလို့ကတော့ အားနည်းသူကို ငွေရှင်နဲ့ အာဏာရှင် ပေါင်းပြီး ဖွပ်သထက်ညစ်အောင်
ပြဌာန်းပေးရမယ့် ဥပဒေက ကလေးလုပ်သားကို (ဒေါ်အီးဒုံးပြောတဲ့ ဥပမာထဲကလို)
အန္တရာယ်ရှိတာ မခိုင်းရဘူး။ ဘယ်လို ပရီကောရှင်းတွေ ယူရမယ်။ လစာအနည်းဆုံး ဘယ်လောက်
ပေးရမယ်။ တနေ့ဘယ်နှနာရီသာ အများဆုံးခိုင်းရမယ် စတာတွေ ပါ။
နိုင်ငံတကာမှာလည်း ကလေးလုပ်သား တွေရှိပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင် စားပွဲထိုး လိုမျိုး
ငွေရှင်းကောင်တာလိုမျိုး နေရာတွေမှာ လုပ်တာမျိုး အများစုကတော့ Part-time တွေပါ။
ကျောင်းမတက်ဘဲ အလုပ်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး (သိပ်ဆင်းရဲတဲ့ ချွင်းချက်ကေ့စ်တွေလည်း ရှိပေမယ့်)
ကျောင်းတဖက်နဲ့ အပိုဝင်ငွေရှာတာပါ။ (တွေ့ပါ ဒီမှာ အလယ်တန်းကျောင်းသားလေးတွေ အပိုဝင်ငွေရှာပြီး
ခရီးသွားရတာနဲ့ ဂစ်ဘဆင်ဂီတာ ၀ယ်တီးရတာနဲ့ ကျုပ်ခေါင်းလောက်ကြီးတဲ့ ပြောင်းနဲ့ ဒါ့ပုံလှည့်ရိုက်ရတာနဲ့)
အိုက်ဒလို ခည …
အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေ လုပ်တော့ လုပ်သူလည်း အပိုဝင်ငွေရပါတယ်။ အစိုးရလည်း အခွန် ရပါတယ်
လုပ်သား လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်လို့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားလည်း တက်ပါတယ်။ ဂျီဒီပီတက်ပါတယ်။ အစိုးရ လက်မထောင်နိုင်ပါတယ်
အိုက်ဒိကလေးတွေ ရတဲ့အပိုဝင်ငွေကို ပြန်ဖြုန်းဆော့ မဆက်စပ်တဲ့ အခြားလုပ်ငန်းတွေလည်း ဖြုန်းအားတက်ပါတယ်။ အစိုးရ အခွန်ထပ်ရပါတယ်။
အသက်၂၀-၂၅ အတွင်း အမျိုးသမီး (အပျို)ရုပ်ရည်သန့်ပြန့် ၁၀တန်းအောင် မှ ခန့်မည်ဆိုတဲ့ ငွေရှင်မျိုးတွေ ပပျောက်ပါတယ်။
မပပျောက်လို့ ဒစ်စ်ခွစ်မနေးရှင်းအက် နဲ့ ရှေ့နေ ဒါမှမဟုတ်သမဂ္ဂတခုခုက တရားဆွဲတော့ တရားရေးဘက်က အလုပ်ရပါတယ်။
လိမ်မာဇမ်းဘာ အဘရယ် လမ်မာဇမ်းဘာ အဘရဲ့….
” အသက်၂၀-၂၅ အတွင်း အမျိုးသမီး (အပျို)ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်
၁၀တန်းအောင် မှ ခန့်မည်ဆိုတဲ့ ငွေရှင်မျိုးတွေ ပပျောက်ပါတယ် ”
ဟီ ဟိ ။ ပြောရအုံးမယ် ။
ခုနောက်ပိုင်း နာမည်ကြီးနေတဲ့ အလုပ်ခေါ်စာက ၊
၁၀တန်းအောင် တောင် မရတော့ဘူး ။
အသက်၂၀ မှ ၂၆ နှစ် အတွင်း ။
အမျိုးသမီး ( အပျို ) ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ရမည် ။
ဆရာဝန် မ ဖြစ်ရမည်တဲ့ ။
Post နဲ့ မဆိုင်ဘဲ ဟိုဘက် Post ကမှတ်ချက် ကို ဝင်ယူလာလို့ စောဒီးပါ။
ဒါပေမဲ့ ပိုင်ရှင် မဖတ်မိ ဘဲ နေမှာစိုးလို့ပါ။
ပညာအလင်းဆိုတဲ့ မျက်​စိမရှိမှ​တော့ သူတို့စိတ်​ထဲရှိ တဲ့အတိုင်းပဲမြင်​နိုင်​ကြတယ်​။
အမှားကိုအမှား အမှန်​ကိုအမှန်​ သိဖို့က ပညာဆိုတဲ့ အလင်းမျက်​စိရှိမှ ခွဲခြမ်းစိတ်​ဖြာပြီး သိပါမယ်​။
ဒါ​ကြောင့်​ လူငယ်​​တွေ တန်​ဖိုးရှိတဲ့စာ များများဖတ်​ပါ၊​တွေး​ခေါ်ပါ ၊ဒါမှ သူများ​ယောင်​တိုင်​
လိုက်​မ​​ယောင်​ကြမှာ။စာ​တော့​ဖတ်​ပါရဲ့ မစဉ်းစား မ​တွေး​ခေါ်ရင်​လဲ စားသာစားပြီ အရသာမသိ
ဖြစ်​လိမ့်​မယ်​။ဒါ​ကြောင့်​ တန်​ဖိုးရှိတဲ့စာ များများဖတ်​ များများ​တွေးကြပါလို့ လူငယ်​အများကို
ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြည့်ဆောင်ရွက်ကြသူတွေပါလား၊ ရှိကြလား ခင်ဗျာ
ဟီး မတိလို့နော် ဆိတ်ချိုးနဲ့ ပြောရရင်တော့အများကြီးပဲ
လက်ဒွေ့ဂွင်းဆင်းဂျိးမှ.. ကားးးလားမ.. ငယ်ငယ်ချောဂျောလေးတွေ.. တအုံးးးတမားးးးးဂျီး.. “ဘွား”ကနဲ့ဒွေ့ရင်.. ဘားလိုလုပ်ဂျမလဲဟင်င်င်…။
ဘားမှ.. မားဆိုင်လည်း.. ဂွင့်လွှတ်..
အယ် … တူယဲ တွက်တွက်ခါအောင် ပေါတတ်ဒယ်တော့ …
အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့လဲမြင်ခဲ့ပြီးပြီ။သူရဲ့ချို့ယွင်းချက်ကို ခုစကြည့်နေတာမို့ ချို့ယွင်းချက်တွေအများကြီးထဲကထောက်ပြတာလေးပါ။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ရယ်လို့ရပ်တည်ဖို့စဉ်းစားထားရင်ဆုံးဖြတ်ထားရင်အားနည်းချက်ချို့ယွင်းချက်မှားယွင်းမူ့တွေရှိလာရင်ထောက်ပြလာတာကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။အမြင့်ကိုတက်နေတဲ့လူကလေတိုက်တာကိုကြောက်နေရင်တတ်မနေပါနဲ့။မြေကြီးပေါ်မှာပဲနေလိုက်ပါ။ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုအမြဲတမ်းခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစဉ်မဖြစ်ဘူး။အားနဲချက်ကိုဝေဖန်ထောက်ပြပေးမှ အဲဒါကိုလက်ခံပေးမှ တိုင်ပြည်အတွက်အကျိုးရှိမှာပါ။အဲခုနကမိခင်စိတ်ဆိုတာကိုကျနော်ကတော့မလျော့နိုင်ဘူးနော်။မိခင်စိတ် ဖခင်စိတ်ဆိုတာ မိသားစုတွင်းမှာမပေးနိုင်ရင် ??ခုစာတွေမှာရေးထားတာတွေကသူ့အကြောင်းကိုစာရေးဆရာလက်စွမ်းပြသနားစဖွယ်ကျိုးကြောင်ဆီလျော်အောင်မျက်ရည်လည်လာအောင် ဝါဒဖြန့်ပုံစံတွေနဲ့ရေးထားတာပါ။ဆိုက်ဝါးရေးနည်းပေါ့ဗျာ။
ဖေ့ဘုတ်မှာတင်ပလူပျံနေတာ။ခုလက်ရှိ့မိခင်စိတ်နဲ့တိုင်ပြည်အတွက်နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးတိုင်ပြည်အတွက်ဘာလုပ်နေလဲတော့မသိဘူး။တိုင်ပြည်ထဲမှာတော့ပွစာကျဲနေပြီ။ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်တွေ။ဒီလိုပြောလို့ မင်းကကြံ့ဖွံ့ကိုထောက်ခံသလားတော့မမေးနဲ့။ကျနော်မဲနဲ့သူတို့အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျနော်ကကျနော့်မိသားစုကိုချစ်တယ်။ကျနော့်မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ကျနော်မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားချစ်သလိုသူတပါးမိသားစုလဲသူတို့မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားမှာပဲဆိုပြီးသူတို့တန်ဖိုးထားတာကိုကျနော်စိတ်နဲ့တောင်မထိရက်တော့ဘူး။မိသားစုအရေးကောင်းနေမှရပ်ကွက်အရေးကောင်းနိုင်မယ်။ရပ်ကွက်အရေးကောင်းမှမြို့နယ်အရေးကောင်းမယ်။မြို့နယ်အရေးကောင်းမှတိုင်း ပြည်နယ်အရေးကောင်းမယ်။တိုင်း ပြည်နယ်အရေးကောင်းမှပြည်ထောင်စုကြီးကောင်မယ် ဆိုတာကိုလက်ခံသင့်တယ်။တိုင်းပြည်တခုကောင်းဖို့တိုးတတ်ဖို့ဆိုတာလူတဦးချင်း မိသားစုတစုချင်းကောင်းမှမေတ္တာတရားရှိမှကောင်းမှာပါ။အလှမ်းကျယ်အလယ်လပ်နေရင်တော့ ကျိမ်စာတင်မကဘူး ကဒ်ပါဆိုဒ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားနိုင်ပါကြောင်း ပြည်သူတဦး၏မိခင်မိသားစုမေတ္တာအကြောင်း နားလည်မိသလိုရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှားပါရင်ထောက်ပြပေးပါဗျာ။ဒေါသသံစကားလုံးများပါမိရင်မရင့်ကျက်သေးလို့ဗွေမယူပဲသည်းခံပေးပါခဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဖေ့ဘုတ်မှာတင်ပလူပျံနေတာ။ခုလက်ရှိ့မိခင်စိတ်နဲ့တိုင်ပြည်အတွက်နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးတိုင်ပြည်အတွက်ဘာလုပ်နေလဲတော့မသိဘူး။တိုင်ပြည်ထဲမှာတော့ပွစာကျဲနေပြီ။ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်တွေ။ဒီလိုပြောလို့ မင်းကကြံ့ဖွံ့ကိုထောက်ခံသလားတော့မမေးနဲ့။ကျနော်မဲနဲ့သူတို့အစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျနော်ကကျနော့်မိသားစုကိုချစ်တယ်။ကျနော့်မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ကျနော်မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားချစ်သလိုသူတပါးမိသားစုလဲသူတို့မိသားစုကိုတန်ဖိုးထားမှာပဲဆိုပြီးသူတို့တန်ဖိုးထားတာကိုကျနော်စိတ်နဲ့တောင်မထိရက်တော့ဘူး။မိသားစုအရေးကောင်းနေမှရပ်ကွက်အရေးကောင်းနိုင်မယ်။ရပ်ကွက်အရေးကောင်းမှမြို့နယ်အရေးကောင်းမယ်။မြို့နယ်အရေးကောင်းမှတိုင်း ပြည်နယ်အရေးကောင်းမယ်။တိုင်း ပြည်နယ်အရေးကောင်းမှပြည်ထောင်စုကြီးကောင်မယ် ဆိုတာကိုလက်ခံသင့်တယ်။တိုင်းပြည်တခုကောင်းဖို့တိုးတတ်ဖို့ဆိုတာလူတဦးချင်း မိသားစုတစုချင်းကောင်းမှမေတ္တာတရားရှိမှကောင်းမှာပါ။အလှမ်းကျယ်အလယ်လပ်နေရင်တော့ ကျိမ်စာတင်မကဘူး ကဒ်ပါဆိုဒ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်သွားနိုင်ပါကြောင်း ပြည်သူတဦး၏မိခင်မိသားစုမေတ္တာအကြောင်း နားလည်မိသလိုရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှားပါရင်ထောက်ပြပေးပါဗျာ။ဒေါသသံစကားလုံးများပါမိရင်မရင့်ကျက်သေးလို့ဗွေမယူပဲသည်းခံပေးပါခဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အရီးခင်လတ်မိခင်မေတ္တာကိုခံစားနိုင်ပါစေ။